E-Journal: Me and My friend's Dialog
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 12:05 AM
ရေစက်ချပြီးမှ လျှုတဲ့ အလျှုမျိုး မဟုတ်ခဲ့ရင်တောင်
ရင်ကလာတဲ့ သဒ္ဒါနဲ့ လျှုခဲ့ဖူးသူတွေရှိပါလိမ့်မယ်...
နည်းခြင်းများခြင်း ဆိုတာ အလျှုရှင်တစ်ဦးအတွက်
အားငယ်စရာ(သို့) ဂုဏ်ယူစရာ မဟုတ်ပါဘူး..
ကျမတို့ရဲ့ နားလည်နိုင်တဲ့ ဦးနှောက်လေးတွေကို အသုံးချပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာရယ်မှ မဟုတ်၊စေတနာကို အရင်းခံလို့ ဖြစ်တည်လာတဲ့ ဒါနပြုခြင်းဖြင့် ကြည်နူးခြင်း ပီတိတွေကိုခံစားနိုင်ကြပါစေ..။
post နဲ့တိုက်ရိုက် မသက်ဆိုင်ခဲ့ရင်တောင် လေးစားစွာဖြင့်ရေးထားခဲ့ပါတယ် ..။
နင်ကတော့လုပ်ပြီ.. လျှု..!!!!!! ဘာကြီးတုန်းဟ..
“ရေစက်ချပြီးမှ လျှုတဲ့ အလျှုမျိုး မဟုတ်ခဲ့ရင်တောင်”
ဟွန်း.. နင်တော့နော်.. မြန်မာစာရိုက်တာလေ့ကျင့်ပါဆို အပျင်းကထူနေ.. ခုတော့မှားပြီမလား..
အလှူ.. လှူဒါန်း.. အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလား.. ဒါမှမဟုတ်လည်း လှူဒါန်းပေါ့.. နင့်ဟာက လျှုဆိုတော့.. ဟွန်း..
သဒ္ဒါ..!!! တဲ့ .. သဒ္ဓါမဟုတ်ဘူးလား.. သဒ္ဓါကြည်လင်ပါရမီရှင်.. အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလား..
E-Journal က အစ်ကိုတို့ရေ.. အဲ့ဒါသာကြည့်တော့ ခင်လေးတစ်ယောက် လုပ်ပေါက်လုပ်ပေါက်.. နားလည်ပေးလိုက်ကြပါဗျာ အမိုက်အမဲလေးမို့.. :P
ကိုသုခမိန်ရေ.. ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဗျာ.. အမြဲလာတယ်နော်.. :)
(ခုဒ္ဒကနိကာယ်၊ ဓမ္မပဒ - ၂၇၆)
ခီဏံ ပုရာဏံ နဝ နတ္ထိ သမ္ဘဝံ
ဝိရတ္တစိတ္တာ ယတိကေ ဘဝသမ္မိံ။
တေ ခီဏဗီဇာ အဝိရူဠှိဆန္ဒာ
နိဗ္ဗန္တိ ဓီရာ ယထာယံ ပဒီပေါ။
အာယတိကေ ဘဝသမ္မိံ-နောင်အနာဂတ်ဘဝကို၊ ဝိရတ္တစိတ္တာ-တပ်မက်ခြင်းကင်းသောစိတ် ရှိကုန်၏။
တေ ဓီရာ-အကြင် ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၊
အဝိရူဠှိဆန္ဒာ-မစည်ပင် မပွားများသော အလိုဆန္ဒရှိကုန်သည်ဖြစ်၍၊
နိဗ္ဗန္တိ -ရုပ်နာမ်ခန္ဓာအသစ်မဖြစ်တော့ဘဲ ငြိမ်းလေကုန်၏။
အယံ ပဒီပေါ- ဤဆီမီးသည်၊ နိဗ္ဗန္တိယထာ-ငြိမ်းသကဲ့သို့၊
တေ ဓိရာ- အကြင် ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၊ နိဗ္ဗန္တိ-ငြိမ်းကုန်၏။
ကောင်း၏။ ဘဝသစ်ဖြစ်ရန် မျိုးစေ့ကုန်ပြီ ဖြစ်သောကြောင့်....။
ဒီလို ဗဟုသုတ အတွက်ကျေးဇူးဗျို့။
ရာဂ၊ဒေါသ၊မောဟ၏ ကုန်ခြင်း အကြင်သဘောတရားသည် ရှိ၏။ ထိုသဘောတရားကို နိဗ္ဗာန်ဟုဆိုအပ်၏။
နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ရသည်ဆိုရာ၌ မဂ်ခဏ၌ ရသည်၊ရောက်သည်မှတ်။စုတိကမ္မရုပ်ချုပ်ပြီးမှ ရစရာရောက်စရာ
ချုပ်ငြိမ်းမှုသည် ရုပ်နာမ်ချုပ်ငြိမ်းမှုကို မဆိုလိုဘဲ တညီးညီးတောက်လောင်နေသော ကိလေသာရာဂမီး၏ ချုပ်ငြိမ်းမှုကို ဆိုလိုကြောင်းသတိပြုပါက နိဗ္ဗာန်၏ မူလအဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်ရန် မခဲယဉ်းချေ။
ကိလေသာရာဂမီး၏ ချုပ်ငြိမ်းမှုက နိဗာန်ဟု ဆိုလေသောကြောင့်။
ကိုဗာဘိုရေ Dialog လေးကို သဘောကျတယ်။ ကျနော်ကတော့ အဲလို အသိတွေ မရှိတော့ ခုလိုလေး သိရတာ အားရ ကျေနပ်လှသဗျာ။ ကျနော်တို့က မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပါဗျာ။ နဲနဲလေးသိ၊ မှန်မ မှန် ထပ်မသုံးသပ်ပဲ ပီးပီးေ၇ာဆိုပြီး ဦးချသူတွေလို့ပြောရမယ်။ ခုလိုလေးတွေ သိရတော့ ကျေးဇူးပါဗျို့။ ဘာသာရေးတွေ လာဆွေးနွေးပေးတယ်ဆိုတော့ ကို ++ ကြီးထင်ပဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျို့ ။